बोल्लेल्ड रिंग - बेलारूडो भित्री स्थलमा रहेको 18 औं शताब्दीको अन्त्यमा मस्कोको परिदृश्य स्थलचिन्ह, एक रक्षात्मक किरण हटाइएको छ र अनावश्यक रूपमा ध्वष्कार गरियो। पर्खालको टावरको टावरहरू पनि नष्ट भए, र तिनीहरूको स्थानमा वर्गहरू बनाइएका थिए, जसका नामहरू उनीहरूको विगतको भेटघाट सम्झन्छन्। नामहरूमा त्यहाँ गेटको उल्लेख हो: पोकोरोस्की गेट्स, अर्बट गेट, निकिट्सकी गेट्स, आदि।
बोल्वाररमा कतिवटा बेलुकाहरू?
कुल, दस बोवरियहरुलाई स्थापित गरियो, जो घोडासौल को रूप मा, एक मास्को को आसपास को केन्द्र को रूप मा एक को पछि एक को व्यवस्था गरियो। मास्को नदीको तटस्थताको विरुद्धमा "घोडाशय" बाकीको अन्त्य, बोलिभर रङ आफैलाई बनाइएको छ। मस्कोको नक्सा वर्गका साथ सबै बोलेर्डरहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी समावेश गर्दछ। गार्डन रिंग को विपरीत, बोल्लेर्ड मा एक अधिक कम्पैक्ट रूपरेखा छ।
बोलेभर्ड रिंग (मस्को, जसलाई भनिन्छ, लामो समयको लागि बनाइएको थियो) यसको हालको फारममा तुरुन्तै देखा पर्दैन। वास्तुकार एस। Karin, 179मा पहिलो बुलार्ड, टावर्सकोय, को स्थापना गरीएको थियो, र त्यसपछि टावर्सकोओ बोलेवर्ड को अर्को पक्षमा नौ अन्य ब्रुवार्डो मार्ग विभाजित गरियो। अन्ततः 1 9औं शताब्दीको पहिलो पङ्क्तिमा मस्को बोलेर्ड रिंग गठन भयो।
यो Prechistenka मा सोओमोनोस्कोसी पासेज देखि उत्पन्न हुन्छ र Prechistenskie गेट स्क्वायर देखि Arbat स्क्वायर सम्म जारी छ। यो साइटलाई गोगोल बोलेभर्ड भनिन्छ । Arbat स्क्वायर Arbat गेट स्क्वायर मा पुग्छ। Arbat गेट बाट Nikitsky Boulevard, जो क्षेत्र Nikitsky गेट मा पुग्छ। यस समयमा बोल्लेन्ड रिंगले म्यान्ज़ेनया स्क्वायर को अनदेखी बोल्शाया निककिस्काया स्ट्रीट संग जोड्छ।
Nikitsky गेट्स पछि, अंगूठी टावर Boulevard जारी छ, जो Pushkin स्क्वायर मा पुग्छ। Pushkin स्क्वायरबाट स्ट्रस्टस्टोय बोलेवर्डबाट, यसको अन्त्यमा पीटरको गेट स्क्वायर हो, जुन प्रसिद्ध मास्को स्ट्रीट Petrovka द्वारा पार गरिएको छ। पीटरको गेट पछि, बोलेभर्ड रिंगले पेट्रोव्स्की बोल्लेल्डलाई जारी राख्छ, जुन ट्रबुनाया स्क्वायरसम्म पुग्छ।
थप, Trzhnaya स्क्वायर, Rozhdestvensky बोलवर्ड देखि, Sretenskiye Vorota स्क्वायर संग जोडने, जो Sretensky बोलवर्ड को शुरुवात हो। स्क्वायरबाट बोल्शाया लुब्यांका र श्रीर्येनका सडकहरू जान्छन्।
Sretensky बोलवर्ड Turgenev स्क्वायर संग समाप्त हुन्छ, जो Myasnitskaya स्ट्रीट र Sakharov अकादमिक एवेन्यू संग जोडता छ। स््रेस्सेन्स्की बोल्लेर्डको अन्त्यमा त्यहाँ माइसेन्सिस्की वोरटा स्क्वायर छ, जसबाट चिस्टोप्रोडनी बोल्लेर्ड पोर्च्रोस्की गेट्स स्क्वायरमा जान्छ। अर्को स्क्वायर, खुखोलोभस्काया, जहाँ पोक्रोस्की ब्लोवर्डको शुरुवात हुन्छ, जुन तुरुन्तै योउज ब्रुअर्डर्डमा पुग्छ।
Yauzsky Boulevard Yauzsky गेट संग समाप्त हुन्छ, जसबाट यूस्टिस्की पासेज, मास्को बोल्वार्ड रिंग को अन्तिम लिंक हटाइन्छ।
बोल्भर्ड्स र तिनीहरूका फरक मतहरू
केही 10 बोइङ बोर्डको आफ्नै विशिष्ट विशेषताहरू छन्। गोगोल बोलेभर्ड तीन तहमा राखिएको छ। आन्तरिक राजमार्ग माथिल्लो तहको साथ जान्छ, मध्य बीचको बीचमा एक मध्य, र बाह्य मार्गको साथ बाह्य यात्रा पास हुन्छ। यो स्टेपिंग Boulevard Chertoroy स्ट्रीम को विभिन्न हाइट्स को कारण थियो, जो एक पल्ट गोगोल बोलेवर्ड को साइट मा फैल्यो।
सबै पोखर्रोस्की को सबै भन्दा "युवा" ब्रूवार्ड छ, लामो समय सम्म उनको शिक्षा पोकोरोस्की बैरक र उनको साथमा एक विशाल परेड ग्राउन्ड द्वारा छरिएको थियो। प्लाट् 1954 मा ध्वस्त भएको थियो, र पछि मात्र गली एक पूर्ण बोलेवार्ड मा परिणत भयो।
छोटो बेलौल Sretensky छ, यसको लंबाई केवल 214 मीटर छ, र सबैभन्दा लामो - ट्रॉर्को बोलेवर्ड, 857 मिटर। रेकर्ड चौडाई - 123 मीटर - भिन्न होस्टस्टनोओ बोलेवर्ड।
बोलेर्ड रिंग यसको स्मारकका लागि प्रसिद्ध छ:
ए Pushkin स्क्वायर मा Pushkin।
स्ट्रस्टनय बोलेवर्डमा व्लादिमीर वाइस्सस्की र सर्गे रचमानिनोभ।
Gogol Boulevard मा NV गोग र मिखाइल शोलोकोव।
ए। एस। गिरीयोदेव बो Boulevard Chistoprudnom मा।
Tverskoy Boulevard मा सर्गेई यिनेनिन र के.टी. टिमियरेव।
Sretensky Boulevard देखि बाहिर निकल मा वहाँ वी जी शुखोव को स्मारक छ।
मस्को बोलेर्ड रिंगको परिधिमा निम्न मेट्रो स्टेशनहरू छन्:
स्टेशन "कोपोटोकिन्केया" (Sokolnicheskaya रेखा) ;
स्टेशन "Arbatskaya" (Filevskaya रेखा) ;
स्टेसन "पुष्किस्काया" (ट्यागान्स्को-क्रास्नोप्रेस्नेस्काया रेखा);
स्टेसन "ट्रोस्किया" (जमोस्कोभोरस्किया रेखा);
स्टेसन "चेखोस्कोयाया" (सेरपोखोसोओ-टिमियरिजस्काया रेखा);
स्टेशन "ट्रबुनाया" (ल्यूबिन-दिमित्रोस्काया रेखा);
स्टेशन "टर्गेनभस्काया" (कलजुहस्को-रिजास्काया रेखा);
स्टेशन "एस्रेन्स्की बोलिवार्ड" (ल्यूबिन-दिमित्रोस्काया रेखा);
स्टेशन "सफा पाउन्ड" (सोकोलोनिचेसकाया रेखा)।
कोन्का र ट्राम
बोल्लर रिंगमा कुनै यातायात थिएन, Muscovites cabmen द्वारा संचालित। यद्यपि, 1887 मा घोडा गाडीहरूमा ब्वाइटरहरूमा देखा पर्यो। Konka 1911 सम्म काम गरे, त्यसपछि ट्रामवे को बोलेर्ड रिंग को साथ शुरू भयो। मार्गलाई परिपत्र मानिन्छ, यद्यपि कारहरू केवल दुवै दिशामा मास्कवा नदी किनारमा गए।
1947 मा, बोल्डर्ड रिंग आंशिक रूपमा मास्कोको 800 औं वर्षगांठमा पुनर्स्थापित भएको थियो। सार्वजनिक बागानमा पुरानो बेंचहरू नयाँ र आधुनिक द्वारा बदलिएका थिए। पुरा तरिकाले जाल बाड़ को बदली, उस समय सम्म पहिले देखि नै घृणा भयो। यसको सट्टा लोहेको बास लगाएर राखिएको थियो। 2011 देखि, बोलेर्ड रिंग को सबै प्रकारका विरोध रैलियहरुलाई र प्रदर्शनका लागि एक मनपर्ने स्थान भएको छ।
चेन्नई (भारत): आकर्षण, उनीहरूको तस्बिर र विवरण
गर्मीमा वा सर्दियामा जेलेंडहिकमा कहाँ जानुहोस्?
कार्कैसोनन - फ्रान्स वा लिङ्गेडोकको शहर?
कसरी प्रेतविद्यासम्बन्धी "अभिभावक स्वर्गदूतहरूलाई" पूरा गर्न?
बच्चा को मूत्र मा nitrites के
MTZ-100: अवलोकन, विशेषताहरु, सक्षमता